Khelkudsansar.com | कस्तो होला बार्सिलोनाबिनाको स्पेनी लिग ? के होला एल क्लासिकोको भविष्य?
कस्तो होला बार्सिलोनाबिनाको स्पेनी लिग ? के होला एल क्लासिकोको भविष्य?
Posted on: September 23, 2017 | views: 833
एजेन्सी । ‘बार्सिलोनाबिनाको स्पेनी लिगा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ,’ रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले भनेका छन्, ‘म फुटबल वा अन्य कुनै खेलको फ्यानका रुपमा यो कुरा कल्पना गर्न सक्दिनँ।’ रियलबाटै लामो समय फुटबल खेलेर त्यहीँका प्रशिक्षक बनेका जिदानजस्तै बार्सिलोनाबिनाको लालिगाले आफ्नो रङ गुमाउनेमा करोडौँ फुटबल फ्यान विश्वस्त छन्। तै पनि केही समययता क्याटालोनिया स्पेनबाट अलग हुने चर्चाका बीच बार्सिलोनाको भविष्यबारे पनि अनेक अनुमान गरिन थालेको छ।
अक्टोबर १ मा क्याटालोनियाको सरकारले स्पेनबाट अलग हुने कि त्यहीँ रहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्दैछ। यदि अलग हुने भन्ने पक्षले जितेमा तत्कालै स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने उसले सरकारले जनाएको छ। स्पेन सरकारले भने क्याटालोनियाको सो निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ। स्पेनी अधिकारीहरु अक्टोबर १ को जनमत संग्रह हुन नदिने सम्भव सबै उपाय लगाइरहेका छन्। जनमत संग्रहलाई अवैधानिक घोषित गरिएको छ र स्पेनी प्रहरीले क्याटालन अधिकारीहरुलाई पनि गिरफ्तार गरिरहेका छन्।
प्रहरी हस्तक्षेपको विरुद्ध क्याटालनबासी बार्सिलोनाको सडकमा ओर्लिएका छन्। स्पेनभन्दा अलग झण्डै १ हजार वर्ष लामो इतिहास बोकेको क्याटालन देशकै धनीमध्ये एक क्षेत्र मानिन्छ। जनरल फ््रयांकोको उत्पीडन सहेको यो क्षेत्र उनको मृत्युपछि फेरि जुर्मुरायो।
सन् २००६ मा बनेको कानुनले क्याटालोनियालाई ‘नेसन’ को हैसियत प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक अधिकारसम्पन्न बनायो। तर २०१० मा स्पेनको संवैधानिक अदालतले क्याटालोनियाको अधिकारमा व्यापक कटौती गर्‍यो। २०१५ को निर्वाचनमा अलग राज्य माग गर्ने पक्ष विजयी भएपछि क्याटालोनियामा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरियो। राष्ट्र अविभाजित रहने देशको संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै क्याटलोनियाको संसदले जनमत संग्रह गराउन नयाँ कानुन बनायो।
अक्टोबर १ मा हुने जनमतसंग्रहको मतपत्रमा एउटा मात्रै प्रश्न हुनेछः के तपाईं क्याटालोनिया एक अलग गणतान्त्रिक राज्य बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? मतदाताले हुन्छ र हुन्नमा मत दिनेछन्। कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगले नतिजा सार्वजनिक गरेको ४८ घण्टामा संसदले स्वतन्त्रता घोषणा गर्नुपर्नेछ। यी सबै राजनीतिक तानातानीबीच अन्यौलमा रहेको एउटा पक्ष हो, फुटबल। क्याटालोनिया स्पेनबाट अलग भए बार्सिलोनाले ला लिगा खेल्ला? विश्वभरका फुटबल प्रेमीलाई यो प्रश्नले सताएको छ।
सबैभन्दा बढी हेरिने एल क्लासिकोको भविष्य के होला? अनि लियोनल मेसीको जादु ?
बार्सिलोना बोर्डका सदस्यहरुले आफूहरु राजनीतिकर्मी नभएको बताएका छन् यद्यपि जनमतको कदर हुनुपर्ने बताएका छन्। क्याम्प नुमा स्वतन्त्रतासमर्थक हरुलाई जुलस गर्न दिइएको छ। केही स्वतन्त्रता विरोधीहरु क्याटालोनिया अलग भए बार्सिलोनालाई ला लिगा खेल्न दिनु नहुने बताउँछन्। अरु त अरु ला लिगाको अध्यक्ष ह्याभिएर टेबास नै यो भनाइको समर्थनमा छन्। ‘क्याटालोनियामा स्वतन्त्रताको प्रक्रिया चलिरहँदा आफूले खेल्ने स्थान छान्न बार्सिलोनोले पाउँदैन,’ उनले भनेका छन्।
‘हामी फुटबल दुनियाँको नेतृत्वदायी ब्राण्ड हौँ। त्यसैले स्पेनसहित विश्वका जुनसुकै लिग पनि हामीलाई लिन चाहन्छन्,’ बार्सिलोनाका एक सदस्यको भनाइ बिबिसीले उधृत गरेको छ। त्यसको प्रतिवादस्वरुप केही स्वतन्त्रता चाहनेहरु बार्सिलोनालाई विश्वका जुनसुकै लिगले पनि स्वागत गर्ने तर्क गर्छन्। बार्सिलोना बोर्ड पनि आफूहरुलाई अन्य देशको लिगमा स्थान दिइने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन्। थुप्रै फुटबलप्रेमीहरु क्याटालान स्वतन्त्र भइहाले पनि एल क्लासिको र लालिगामा बार्सा रहँदाको रोमाञ्चकता गुमाउने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।
बार्सिलोनाकै सहरी प्रतिद्वन्द्वी एस्प्यान्योलका समर्थक भने स्वतन्त्रताविरोधी मानिन्छन्। तर बार्सिलोनाका उपाध्यक्ष कार्लेस भिल्लारुबीले यसै महिना भनेका छन्, ‘एस्प्यान्योल जहाँ खेल्छ, हामी पनि त्यहीँ खेल्छौँ।’ बार्सिलोना लालिगाबाट अलग हुँदाको अवस्थामा त्यसको प्रभाव बहुआयामिक छ। २४ लिग उपाधि जितेको बार्सिलोनाले सबैभन्दा बढी २९ कोपा डेल रे उपाधि पनि जितिसकेको छ।
मात्र साढे ३८ हजार जनसंख्या भएको स्वतन्त्र राष्ट्र मोनाकोको क्लब लिग वानमा खेलिरहेको छ। केही व्यक्तिहरु भने क्याटालोनियाले बेग्लै घरेलु लिग सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। तर मेसीजस्तोको खेलाडीले क्याटालान क्लबका अर्धव्यवसायिक डिफेन्डरसँग प्रत्येक आइतबार खेल्ने कुरा सोच्नसम्म पनि सकिँदैन।
-साभार: नेपाल खबर